ဖူးနုသဈ: အနျောရထာ မတိုငျခငျ (Express Edition)
ခေတ်သစ် နြူးဗားရှင်း စစ်ပါပေတယ်
လက်တလော အိဗန့်တွေ အကုန်ပါတာပဲ :D
ပျဉ်ပြားဆိုလို့ အိတ်စ်ပို့အကြောင်းရေးတော့မယ် ထင်နေတာ။
ရာဇဝင်ကို ဒီလို ဗားရှင်းအသစ်နဲ့ တခါမှ မဖတ်ဖူးဘူး....။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ဟဲဟဲ....:)
(မိဖုရားကွီး စဈကိုငျးတိုငျးထဲက နာဂတှနေတေဲ့ ဟိုမွို့မှာသာ သှားပွီး ဇာတျမွှုပျနခေဲ့ရငျတော့ မတှေးရဲ စရာပါ။) :think: ဘာမြို့လဲ ကိုယ်က ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေ သိပ်ညံ့တယ်။ ဘာမြို့မှန်း စဉ်းစားလို့မရဘူး။
စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက မြို့နယ်စာရင်း။ :D
အဲဒီလို ခပ်မိုက်မိုက်စတိုင်နဲ့ ပြန်ရေးထားတာတွေ ကြိုက်ပါ့ :)
အချိန်ရတုန်း ပေးထားတဲ့လင့်တွေ ကုန်အောင်ဖတ်သွားမယ်
ရာဇ၀င်ကို ဒီလိုလေး ဟာသစွက်ပြီးရေးထားတာ တယ်ဖတ်လို့ကောင်းသကိုး
ဒီလိုနည်းနဲ့ မြန်မာစာဦးမျိုးအောင် သင်ခဲ့ဖူးတယ်..
ခုတော့ ဇာတ်ညွှန်း ငြိမ်းမင်းပါ
သူ့ရဲ့မြန်မာစာကျူရှင်ဆို မန်းလေးမြို့မှာ လူကျိတ်ကျိတ်တိုးဘဲ.. ရယ်ရလွန်းလို့ အပျော်တက်သူတွေလည်းရှိရဲ့
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့ သိပ်ကိုနံမည်ကြီးခဲ့တာ..
အရည်းကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ချင်တာလေးတစ်ခု ကျန်သွားလို့ ဒီမှာပြောပါရစေ..
ပန်းဦးလွှတ်တဲ့ ဓလေ့ဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လဲ ပြောလို့မရပြန်ဘူး. မယားထိဓားကြည့်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မိပြီဆိုရင် ဘယ်အရာကိုမဆို ကြည်ဖြူတတ်ကြတယ်.. ယုံကြည်တတ်ကြတယ်..
ဒါကြောင့်လည်း ဘိုးတော်ဆိုတဲ့လူတွေ စားပေါက်ချောင်နေတာပေါ့..ခုခေတ်လို ပညာတွေ အသိပညာတွေ အတော်တိုးတက်နေတာတောင် ခုလို လွယ်လွယ်ကူကူ ယုံကြည်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေက ရှိနေသေးတယ်လေ..
ဒါကြောင့် ပုဂံခေတ်တုန်းကလည်း အရည်းကြီးတွေကို တကယ့်ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အစောက ကိစ္စကိုလည်း မကြည်ဖြူနိုင်စရာ ရှိမယ်မထင်ဘူး
ဒါက တွေးမိတာလေး သက်သက်ကို ချရေးသွားတာပါ.. ငြင်းတာ မဟုတ်ရပါ
မချော-> လွတ်လပ်စွာ ငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်။ :D
အရည်းကြီးကိစ္စ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ (ဦးသုခ - မေတ္တသုတ် ထဲမှာလားမသိ) ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကလည်း အဲဒါ သူထင်ရာ မြင်ရာတွေ စွတ်ရေးထားတာလို့ အချက်အလက်တော်တော်များများနဲ့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။
ထိတယ်..မိတယ်... ဖတ်တယ်.. ကြိုက်တယ်....
ဘယ်အချိန်ရေးရေး ဖတ်ကောင်းတယ်။ အဲသာမျိုး ရေးတတ်ချင်လိုက်တာဗျာ။
I have deleted some comments. Haveapeace.
အရည်းကြီးတွေလို မျိုးအာဖရိကတိုက်လူမျိူးတစုမှာ ခုထိရှိသေးတယ်တဲ့ ဖတ်ဖူးတာပဲ ရွာသူကြီးက အဲတာဝန်ယူရသတဲ့ .. မယူချင်လို့ လည်းမရဘူးတဲ့ .. သူတာဝန်မယူဘူးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကို ဘယ်ယောကျာ်းကမှ မယူတော့ဘူးတဲ့း( ။
William Wallace တို့ခေတ်တုံးက အင်္ဂလိပ်တွေက စကော့တစ်တွေကို ဒါမျိုးကျင့်သုံးဖူးတယ် ဘာသာရေးအရမဟုတ်ဘူးနော် သိမ်းပိုက်သူက ကျင့်သုံးတာ
သမိုင်းကို version new နဲ့ဖတ်ရတာ..
You forgot to mention King Anawrahta's other name : Anurhaddin